Namuhla ama-ejensi wezindaba abhekene nezindaba eziphathelene nobuzwe bobubili bukaMaria Maksakova. Umculi we-Opera, owadlula izinyanga ezimbalwa ezedlule e-Ukraine, wavele waxoshwa ebusweni "United Kingdom". Isizakhamuzi saseJalimane senkanyezi sashaqeka ngempela amalungu akhe eqembu.
Namuhla unobhala weGeneral General of the "ER" uSergei Neverov wabiza uMakakov ungumqambimanga, wamangalela ngokufihla ilungelo lokuba yisakhamuzi saseJalimane. Ekhasini lakhe le-Facebook, lo mbusazwe wathi:
Kulo mbuzo yena uvume ukuthi uphule umthetho waseRussia, ovimbela abaphathi be-State Duma ukuba abe yisakhamuzi sakwamanye amazwe. Wavuma ukuthi ungumqambimanga
Kodwa manje "i-United Kingdom Russia" ibiza uMaria Maksakova, owabaleka nomyeni wakhe e-Ukraine, uStanislav Sadalsky wasukuma e-opera diva.
UStanislav Sadalsky wabiza ngokuthi "u-United Kingdom Russia" iqembu lezinkohliso namasela
Ku-Instagram wakhe uStanislav Sadalsky ukhulume ngokuvikela uMakakova. Sekuyisikhathi eside umlingisi waba abangane nomama we-opera nomculi nasezintabeni eziningi zomndeni. U-Sadalsky uthe ubuzwe bakhe besibili, uMaria Maksakova, wanikezwa ekuzalweni kwakhe:
UMaria wazalelwa eJalimane, emndenini wesakhamuzi saseJalimane uPeter Andreas Igenbergs nomdlali weSoviet uLyudmila Maksakova. ISIZULU sokuqala isakhamuzi siye saba njalo - isiJalimane - ngokuzalwa. Konke lokhu kwaziwa, kodwa ngaphambili, ngesizathu esithile, abazange banake.
Ngesikhathi esifanayo, umlingisi uqinisekisa ukuthi ingxenye yamaPhalamende nezihlobo zabo banezakhamuzi ezimbili, kodwa bakhetha ukuthula ngaleli qiniso:
Ngendlela, isigamu seDuma ... izingane, abafazi, amadoda, zangaphambili kanye zangempela) kanye nomkakhe uParkov naye uyisakhamuzi sase-US.
Umlingisi othukuthele uthatha iqembu lase-United Kingdom njengenhlangano yobugebengu, futhi ubulungu balo bungumnyama kumlando we-biography. Umculi wamemezela ngesibindi ngalokhu ku-Instagram yakhe:
Ukuxoshwa ku-Party wezinkohliso namasela kufana nomvuzo. Ukuba yilungu le-EP, iqembu lama-trunks, ama-bandits namasela, liwuphawu olumnyama. Ubulungu ku-ER abupaki noma ubani ...
Akubona bonke ababhalisile baseStanislav Sadalsky abelana ngombono wakhe. Ama-Fallovers, ekhuluma ngezindaba zakamuva, ahlambalaza umculi odumile ngenxa yezinkanuko kanye nesifiso sokujabulisa ingxenye ethile yezilaleli:
Irenaguchi Stanislav, futhi umgogodla wakho wawuguquguquke kakhulu
tanecka_manushina Stas You ass ukushaywa ekuvikeleni noma kubonakala futhi impi kuwe wanamathela, ungalibali! Kuyinto engavamile!
notiyanik Ekuqaleni ukwazi ukuthi iqembu lamasela, kungani uhamba khona ukuze ukhuphuke? !!!!!! Ubani owazi lokhu, akukhathazi ngezandla! Bese ushaya lokho okuvela khona!
polikovalarisa Stas ngabe ngabe usuvele uhambe ngemuva kwabo ....
kasandro82 Futhi ukuthi waphunyuka waya e-Ukraine enenzondo ... ngalokhu ozokusho ...
mariyav_363_ Into ethi Stanislav Yurievich, nalo mbuzo ngokusobala uyawunaki
lubov250159 Stas, udinga ukuvuselela emehlweni ethu umyeni wakhe.
Uthando lokuqala luka-Inna Volovichova lwaba yisidakwa
U-Olga Buzova unqatshiwe wemali engenayo u-Andrei Arshavin, ividiyo
U-Olga Buzova waphonseka ukugxeka ingubo emfushane
UPaulina Andreeva wavakashela umkhosi womndeni eBondarchukov
U-Alla Pugachyova ucaphukile ngokukhalaza ku-Yulia Tymoshenko
Pugacheva kanye neGalkin ngezingane nokubhema
Ingabe ukuhlobisa usizo nge-acne?
Kanjani kahle ukubuyisela isithakazelo ukusebenza?
Izimbangela zokuqothulwa komuntu obomvu kubesifazane
Amaski e-Toning for skin sagging
I-Vampire Diaries, i-Ian Somerhalder
Ngingahlanganyela kanjani nomfana ngaphandle kwezinkinga?
Ungasho kanjani cha?